निफ्रा भ्रम कि यथार्थः लगानीकर्ताले थाहा पाउनैपर्ने यस्तो छ वास्तविकता - Khabar Nepali
होमपेज / Special and Breaking / निफ्रा भ्रम कि यथार्थः लगानीकर्ताले थाहा पाउनैपर्ने यस्तो छ वास्तविकता
निफ्रा भ्रम कि यथार्थः लगानीकर्ताले थाहा पाउनैपर्ने यस्तो छ वास्तविकता
सोमबार, फागुन १०, २०७७	, रिसभ पाण्डे
यतिबेला नेपाली शेयर बजारमा निफ्रा अर्थात नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सर्वाधिक चर्चा बटुलिरहेको छ । जसको मुख्य कारण हालसम्मै सबैभन्दा बढि साधारण शेयरको निष्काशनसँगै निष्काशित ८ करोड कित्ता साधारण शेयरको झण्डै १५ लाख लगानीकर्तालाई ५० र ६० कित्ताको दरले गरिएको बाँडफाँड पनि हो । नेप्सेमा संस्थापक १२ करोड र साधारण ८ करोड कित्ता शेयर गरी जम्मा २० करोड कित्ता शेयर सुचिकृत रहेको छ, जुन नेप्सेमा एउटै कम्पनीबाट हालसम्मकै सर्वाधिक कित्ता शेयरको सुचिकरण हो ।
बैंकले आईपीओ निष्काशन, वितरण र नेप्सेमा सुचिकरण पश्चात् यसको कारोबारका लागि आतुर लगानीकर्ताहरुलाई मध्यनजर गरि गत हप्ताको आइतबारबाट शेयर कारोबारमा ल्याएको थियो । कारोबार सुरु भएको पाँच मिनेट भित्र नै लगभग ५ लाखभन्दा बढि कित्ताको लागि माग भएको थियो भने आइतबार कारोबार बन्द हुने बेलासम्म लगभग ३० लाख कित्ताभन्दा बढीको लागि माग भएको थियो । कुनैपनि कम्पनीको सुरुवाती शेयर मुल्यको निर्धारण उक्त कम्पनीको नेट वर्थको आधारमा तय हुने भएकाले यस बैंकको नेट वर्थ रु ११३.६२ को तीन गुणा अर्थात रु ३४० बाट कारोबार सुरु भएर उच्च मागको कारण कारोबार मुल्यमा कारोबार सुरु भएको दुई मिनेटभित्र नै १० प्रतिशतको सकारात्मक सर्किट पनि देखापरेको थियो ।
बैंकले दैनिक उच्च मागका कारण हालसम्म ६ दिनको कारोबारमा निरन्तर सकारात्मक सर्किट हानिरहँदा बिहिबार यसको मुल्य रु ५४६ मा पुगेर कारोबार बन्द भएको थियो भने आइतबार ६०० मा पुगेको छ । यो सँगै बैंकको लगानीले बजार मुल्य अनुसार खर्ब नाघिसकेको देखिन्छ । ५० कित्ता शेयर मार्फत रु ५००० लगानी गर्ने लगानीकर्ता हालसम्मको बजार मूल्य अनुसार (कमिशन र पूँजीगत लाभकर बाहेक) रु २५ हजार बराबरको मुनाफाको भागिदार भइसकेका छन् । यस बैंकको साधारण शेयर मार्फत भित्रिएका नयाँ लगानीकर्ताहरु दिन प्रतिदिन बैंकको कारोबार मुल्यले हानेको पोजेटिभ सर्किटले गर्दा निकै हौसिएका छन् ।
बिहिबारको मार्केट डेप्थ हेर्दा शेयर माग १५ लाख कित्ताको लागि भएको देखिन्छ भने आपूर्ति शुन्य भएको देखिन्छ । त्यसैगरी हेर्दा आपूर्ति शुन्य देखिए तापनि बुधबार ७० करोड बराबरको र बिहिबार ५० करोड बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ । ठूलो मात्रामा भएको शेयरको सूरुवाती कारोबार त्यत्तिको हुनु, आपूर्ति शुन्य देखिनु र मुल्यमा कुनै नकारात्मकता नआउनु स्वाभाविक कुरा नै हो । धेरै लगानीकर्ता भएकाले दैनिक यसको बजार मुल्यमा आइरहेको सकारात्मकताका आधारमा भविष्यमा यसको मुल्य कतिसम्म पुग्ला भन्ने उत्सुकताले पुरै बजारमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । शेयरको मागमा उच्च चाप कायमै रहेकाले यसको बजार मुल्य अझै केहि दिन सकारात्मक देखिने कुरामा कुनै दुईमत छैन तर लामो प्रतिक्षाको मिठो फल लिनलाई यसका धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो शेयरलाई केहि दिन होल्ड भने अवश्य गर्नुपर्दछ । साधारण शेयर ८ करोड कित्ता मध्येबाट म्युचल फण्डका लागि ५ प्रतिशत छुट्टाइएको थियो ।
बजारमा म्युचल फण्डसँग भएको ४० लाख कित्ता शेयरले गत हप्ताभरि साना लगानीकर्तासँग भएको शेयरलाई फुत्काउन निकै चलखेल भएको देखिन्छ । तर ठुला लगानीकर्ताले म्युचल फण्डले साना लगानीकर्तालाई अत्याउन बारम्बार बर्षाएको आपूर्तिलाई बिचबाटै निलिदिएका थिए । म्युचल फण्डसँग भएको शेयरको केहिभाग ठुला लगानीकर्ताले उठाएपनि उनिहरुले बाँकी शेयरको मद्दतले बजारमा आपूर्ति बढाएर मुल्य घटाउन फेरी पनि सक्दो कोसिस गर्नेछन् तर सबै लगानीकर्ताले सहि कुरा बुझेर धैर्य गर्नसके केहि दिनमा नै यसको मुल्य अझै उच्च हुने प्रष्ट छ ।
कस्तो छ त निफ्राको वास्तविक अवस्था ?
हालसम्मकै धेरै लगानीकर्ताहरु भएको कम्पनी जहाँ नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि प्रशस्तै भएकाले कम्पनीको शेयर आपूर्ति ठप्प र मागको अत्याधिक चापको कारणले वर्तमान अवस्थामा यसको बजार मूल्य दिनप्रतिदिन पोजेटिभ सर्किटको साथ उकालो लागेतापनि कम्पनीको वास्तविक अवस्था भने दयनीय रहेको छ । सुन्दा मन खिन्न होला तर यर्थाथ यहि नै हो । बिशेषगरी यस कम्पनीको मुख्य काम भनेको ठूलो रकममा निक्षेप संकलन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । उसले संकलन गरेको निक्षेपमा दिने ब्याज र ऋणी आयोजनाबाट लिने ब्याजको अन्तर नै आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
निफ्रामा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि न्यूनतम एक करोड रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । जसमा दिने ब्याजदर जम्मा ७.२५ प्रतिशत छ । जबकि वाणिज्य बैंकहरूले नै अहिले योभन्दा धेरै, ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छन् । निक्षेप मात्रै नभई ऋणपत्र लगायत उपकरण जारी गरेर पनि कम्पनीले स्रोत जुटाउन सक्छ । वाणिज्य बैंकका ऋणपत्रको ब्याजदर नै हाल ९ प्रतिशत हाराहारी छ । व्यवसायमा आक्रामक रहेका बाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर स्रोत जुटाउन निफ्रालाई सबभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
अर्कोतर्फ लामो अवधिका लागि ठूलो रकम निक्षेप जम्मा गर्नेहरू एकदमै कम हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले आगामी दिनमा कसरी बिजनेस् गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । साँच्चै नै निफ्राको अहिलेसम्मको वित्तीय स्थिति नाजुक छ । संचालनमा रहेको उस्तै प्रकृतिको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) सँग तुलना गरेर निफ्रालाई हेर्न सकिन्छ ।
एचआइडिसिएलले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्छ भने निफ्राले जलविद्युतसहित अरू पूर्वाधार आयोजनामा पनि ऋण लगानी गर्छ । दुवै सरकारी बहुस्वामित्वका कम्पनी हुन् । धेरै सूचकमा निफ्राभन्दा एचआइडिसिएल माथि छ । तर निफ्राको बजार मूल्य प्रतिकित्ता रु ६०० पुगिसक्यो भने बिहिबार सम्मको मार्केट डेप्थ हेर्दा एचआइडिसिएलको जम्मा रु ३३१ छ । निफ्राले यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म रु ३५ करोड २२ लाख खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा रु ५ करोडले घटेको हो । उसको भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको एचआइडिसिएलले छ महिनामा रु ४२ करोड ८३ लाख खुद नाफा कमाएको छ । १२ करोड चुक्ता पुँजी हुँदा निफ्राको प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा रु ५.८७ थियो भने अब २० करोड हुँदा रु ३.५२ मात्रै हुन्छ । जबकि १६ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी भएको एचआइडिसिएलको रु ५.१९ छ ।
इक्रा नेपालले निफ्राको आइपिओलाई दिएको रेटिङ ४ प्लस छ । इक्राले बलियोका आधारमा कम्पनीहरूलाई क्रमशः १ देखि ५ सम्मको नम्बर प्रदान गर्छ, जसमा ४ र ५ नम्बरका कम्पनी कमजोर मानिन्छन् ।
निफ्राको प्रबन्धपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रतिशेयर आम्दानी रु ८.८२ हुने अनुमान छ । यदि अनुमान पुगेछ भने पनि दुई वर्षपछि हुने त्यो प्रतिशेयर आम्दानीबाट लगानीकर्ताले धेरै प्रतिफलको आशा राख्नु मुर्खताभन्दा माथि अरु केहि हुने देखिन्न । बिहीबारको मूल्यअनुसार निफ्राको मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई रेसियो) १५५ हुन्छ भने एचआइडिसिएलको ६३ छ । यसको अर्थ बराबर लाभांशका लागि निफ्रामा हुने लगानी सबभन्दा धेरै, अर्थात् महँगो पर्नु हो । निफ्रामा भन्दा कम लगानी गरेर एचआइडिसिएलसहित अरू कम्पनीले नै धेरै लाभांश दिने क्षमता राख्छन् । यसको अर्थ यो हैन कि निफ्रा कामै नलाग्ने कम्पनी हो, तर लक्ष्य अनुसारको कामसँगै प्रतिफल पनि हात पार्नसके यो कम्पनी पनि निकै राम्रो अवस्थासम्म पुग्ने हैसियत राख्दछ । जसको प्रमाणका रुपमा उत्कृष्ट सञ्चालक समिति र संस्थापक शेयरहोल्डरलाई लिन सकिन्छ ।
भविष्यमा कस्तो होला निफ्राको शेयर मूल्य ?
हाल निफ्राको कारोबारको सुरुवाती चरण भएकाले यसको शेयर मागमा मात्रै अत्याधिक चाप छ भने आपूर्ति थोरै थोरै भएपनि हेर्दा मागभन्दा निकै कम भएकाले ठप्प जस्तै देखिन्छ । यसैअनुसार हाल यसको शेयर मूल्य सर्किट माथि सर्किट हान्दै उकालो लागिरहेको छ । अल्पकालिन मूल्यको लागि कुरा गर्नुपर्दा सबै लगानीकर्ताले अझै केहि समय आफूसँग भएको जतिपनि शेयरलाई कसिलो पारेर राख्न सके अझै मूल्य माथि जाने निश्चित देखिन्छ । यसका लागि लगानीकर्ताले माथि उल्लेख गरेजस्तो म्युचल फण्डको चलखेललाई राम्रोसँग बुझ्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यो सँगै आत्तिएर शेयरलाई कम मूल्यमा फ्याँक्ने प्रबृत्तिलाई रोक्नसके निफ्राको अल्पकालिन शेयर मूल्यमा पक्कै गिरावट आउने छैन ।
दिर्घकालिन मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा यस बैंकको हालको वित्तिय सुचकहरु त्यति राम्रो नभएपनि बिशिष्ट मेनेजमेन्ट टिम, नेपालको पहिलो र एकमात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नेपाल सरकारको लगानी र संस्थापक शेयरका (नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी, प्रभुबैंक लिमिटेड, एन.आई.सी. एसिया बैंक, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, ग्लोबल आई.एम.ई बैंक, आई.एम.ई, प्रभु इन्स्योरेन्स) जस्ता बिशिष्ट टिम भएकाले बैंकले अनुमानित लक्ष्य सजिलै हासिल गर्दै यसको दीर्घकालिन मूल्य उच्च नै हुने कुरामा कुनै शंका देखिन्न ।
स्राेत: अनलाइन न्युज 7
आज सुन तोलाको कति ? हेर्नुहोस्
ज्योति लाईफ बुधवारदेखि कारोबारमा आउने, ओपन रेञ्ज कति ? (पूरा विवरण सहित)
कहिले सम्म भर्न पाइन्छ रुरुको आइपीओ ? (पूरा विवरण सहित)
आज सुनको भाउ तोलाको कति ? हेर्नुहोस्
आज २५.७१ अंकले बढेर नेप्से कीर्तिमानी विन्दुमा
सुनको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति?
१.कुकुरको हत्या प्रकरण : जनावर प्रेमीले बालक कुटे, घरमा तोडफोड गरेपछि प्रहरी दबाबमा
२.एमआरआर (MRR ) टिम नवलपुरद्वारा मौलाकालिका अपाङ्ग सेवा संस्थामा व्हीलचेयर हस्तान्तरण
३.प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्ड नजाने
४.माया के हो ? हामीलाई किन आवश्यक पर्छ मायाको ? जान्नुहोस् (मनछुने भिडियोसहित)
५.बेलायतका राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार आज
६.साम्राज्ञीलाई मिस टिन उपाधि
७.अनुहारको कालोपोतो कसरी हटाउने ? यि उपाय अपनाउनुहोस् सजिलै हट्छ